Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad Dheer Warbaahinta u mariyay Shacbiga | Somaliland.Org
Madaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad Dheer Warbaahinta u mariyay Shacbiga
November 27, 2012	“Aniga iyo Xisbigaygu waxaan balan qaadaynaa in aanu aqbali doono natiijada doorashada”
“Waxaan leeyahay marka la tartamo la kala tagi maayee, is dhawrta oo wanaaga ha ka tegina”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa shacbiga Somaliland warbaahinta u mariyay khudbad dheer oo uu ugu tallo galay wacyi-gelinta bulshadda ee doorashadda Deegaanka ee Arbacadda beri dalka ka qabsoomaysa.
Madaxweynaha Somaliland waxa uu khudbadiisa si qoto dheer ugaga hadlay gedi-socodka dimuqraadiyadda, natiijadda doorashadda iyo guubaabo la xidhiidha adkaynta nabad-gelyadda dalka. Waxa kale oo uu si adag ula dar-daarmay axsaabta tartamaysa iyo Komishanka doorashooyinka.
Khudbadii Madaxweynuhuna waxay u dhignayd iyadoo dhamaystiran sidan:-
“Bulshada Somaliland dibed iyo gudaba waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka, “ASSALAAMU CALAYKUM WA RAXMATULAAHI WA BARAKAATU”.
Dadka Somaliland meel kasta oo aad joogtaan waxaan idiin rajaynayaa guul, waxaan idinku amaanayaa dedaalka iyo isku-duubnida, waxaana inoo ballana illaalinta qaranimada iyo wadaniyada.
Mudanayaal iyo marwooyin:
Waxaynu ku jirnaa wakhti doorasho, sidaynu wada ognahayna dal dimuquraadiya ayay caadadiisa tahay inuu dawladnimada heerarkeeda kala duwan kula-kalawareego tartan doorasho oo xor iyo xalaal ah. Anagoo taa ka-duulaynana, waxaanu diyaarinay doorashadii golayaasha deegaanka oo ay ku tartami doonaan 7 Urur iyo 2653 musharax guudahaan wadanka oo dhan. Waxaana la rajaynayaa inay kasoo baxaan 3 xisbi qaran iyo 379 xildhibaan kuwaasoo la wareegi doona maamulka dawladaha hoose ee dalka sida shuruucdeenu dhigayso.
Dawlad-ahaan waxaanu u hawl-galnay sidii arrintani u dhici lahayd, waxaanu furnay ururada siyaasadda iyadoo aanu guddi qaran u saarnay oo dalka oo dhammi wada-tashi ka yeeshay, markii laysku raacayna waxaanu u diyaarinay sharcigii lagu hagi-lahaa iyo komishinkii maamuli lahaa, iyadoo aanu u gudbinay Golayaasha Baarlamaanka, labada golena sharcigii waa dhamaystireen hawl-wadeenadiina way ansixiyeen.
Waxaanu u diyaarinay xafiisyadii iyo kharashaadkii aasaasiga u ahaa Xafiiska, iyadoo aanu gacan-buuxda ka siinay sidii ay shaqadooda u bilaabi-lahaayeen. Komishinkuna waxay shaqadoodii u bilaabeen si madax-banaan cidii danaynaysay in ay fursadaa ka faaiidaystaana waxay isu diwaangeliyeen ururo siyaasadeed, 15-kii Urur ee cusbaa iyo 3 xisbi ee hore. Waxaa maanta tartankii isugu soo hadhay 5 Urur iyo 2 Xisbi.
Waxaanu bixinay kharashkii doorashada $2,000,000 US Dollar ah oo u dhiganta %33 halkii aynu ka Bixin jirnay %25 xiliyadii hore. Waxaa kale oo aanu Ururada/Xisbiyada dhamaan ka bixinay gaadiidkii ay ku qaadan lahaayeen muraaqibiinta oo kharash gaadhaya illaa $150,000 US Dollar ah.
Waxaa hadana soo baxay kharash kale komishinku uga baahdeen culays goobaha kaga soo kordhay $100,000 US Dollar ah. Waxaanu diyaarinay ciidamadii amaanka ee dhamaan goobaha codbixinta, oo gaadhay illaa 6000 oo askari.
Walaalayaal, waa inoo diyaar garoonkii tartanka doorashadu, waxaan rajaynayaa inay si nabadgelyo leh inoogu qabsoonto, Illaahayna waxaan inooga baryayaa inuu inagu garab-galo.
Dhammaan Musharixiinta u tartamaya doorashada Golaha Deegaanka, Xisbiyada/Ururada ku hirdamaya Saaxada Siyaasadda ee u tartamaya sidii ay u noqon lahaayeen Xisbiyo Qaran:
Waxaan leeyahay hambalyo,
Waxaan leeyahay saaxiibtinimo ku tartama,
Waxaan leeyahay anshaxa ilaaliya,
Waxaan leeyahay qaranimada dhawra,
Waxaan leeyahay marka la tartamo la kala tagi maayee, is dhawrta oo wanaaga ha ka tegina.
Walaalayaal, Doorashadani maaha doorashadii ugu horeysay, mana aha doorashadii ugu dambaysay, waa doorashadii 5aad ee gayigeena ka qabsoonta, maalin kasta cid baa badinaysay cidna waa laga badinayey, maantana kama duwana ee Saddex Xisbi Qaran ayaa soo bixi doona oo u gudbi donna Xisbiyo Qaran. 378 Xildhibaan ayaa u soo bixi-doona Golayaasha Deegaanka ee Dalka, waxaan u rajaynayaa qaar khayr qaba, dalkan wanaag iyo horumar gaadhsiiya.
Walaalayaal, yuhunta iyo yiqiinta yaanay idinka xumaan, hadalada xanafta leh iska daaya oo doorashada si xor iyo xalaal u guta.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Ciidamada kala duwan ee Qaranka, Saxaafada, Xisbiyada/Ururada Bulshada reer Somaliland ee nabada jecel, waxaan leeyahay nabada ha la adkeeyo, nabadgelyada isu kaashada, nabadgelyadu waa raasamaalka Qarankani haysto ee meel halooga soo wada jeesto, qof kastowba xil baa kaa saran nabadgelyada, waa dantiina ee ilaashada.
Somaliland waxay soo martay xilliyo adag oo cadowgeeduna intan ka badnaa. Maanta waxa Jamhuuriyaddu ku taagantahay tiirar adag oo aan la liicin karin, cabsina kama qabto cadow dibadeed oo jiritaankeeda iyo midnimadeeda waxayeelleeya. Waxaynu leenahay shacbi iyo ciidan heegan u ah in ay ka difaacaan cidkasta oo kusoo gardarroota.
Somaliland waxay ku jirtaa meelaha ugu horreeya ee lagu majeerto nabad iyo deggenaansho gobolkan Geeska Afrika.
Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Komishanka Kala-reebista Ururada, Goob-joogayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ah, Ururada Bulshada, Golaha Guurtida, Madax-dhaqameedka iyo culimada; waxaan ugu baaqayaa inay si feejigan isha ugu hayaan habsami-u-socodka doorashada, meelna ugu soo wadajeestaan cidkasta oo carqalad ku-haysa.
Dhamaanteena aan gacan buuxda ku siino Komishanka Xilka loo igmaday, si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaalahi. Aniga iyo xukuumadayduna waxaan diyaar u nahay in aanu isku garab-taagno Komishinka Doorashooyinka iyo Komishinka Diiwaangelinta gudashada xilkooda, si ay dhamaystiranto dimuqraadiyada Somaliland ka-hanaqaaday, Bulshaduna u gaadho himiladeeda.
Aniga iyo Xisbigaygu waxaan balan qaadaynaa in aanu aqbali doono natiijada doorashada. Xisbiyada/Ururada waxaan ugu baaqayaa in ay aqbalaan wixii ka soo baxa, sharcigana u hogaansamaan una hambalyeeyaan ciddii ku guulaysata. Dalkan mas’uuliyadiisa, Sharciyadiisa, nabadgelyadiisa anigaa xilkiisu isaaran-yahay, mana aqbali doono cidii sharciga ku xad-gudubta, cidii nabadgelyada dhaawacda, cidii jiritaanka iyo masiirka ummadan ka hortimaada.
Bulshada reer Somaliland waxaan leeyahay codkiina si xor iyo xalaal ah u dhiibta, cidii aad u garataana siiya.
Bulshada reer Somaliland waxaan leeyahay isku duubnaada oo ilaashada nabadgelyada.
Bulshada reer Somaliland waxaan leeyahay ilaashada Qaranimada, gacanna ka siiya Hay’adaha amaanka gudashada xilkooda.”
Previous Post“Ninkii Laga Dheereeyoow ina Ilaali oo xaq-dhawr codka dadweynaha”Next PostXukuumadda Somaliland Oo Xidhay Dhammaan Xuduudaha Dalka	Blog